Iza no nanambady an'i Barry Gibb? Ny momba ny fanambadiany tamin'i Linda Gray ho mpivady dia miseho ivelany tsy fahita firy - Pop-Kolontsaina
Iza no nanambady an'i Barry Gibb? Ny momba ny fanambadiany tamin'i Linda Gray ho mpivady dia miseho ivelany tsy fahita firy
Ny mpitendry mozika britanika-amerikanina Barry Gibb dia hita tany Miami niaraka tamin'ny vadiny Linda Gray. Tsy dia miseho imasom-bahoaka i Gibb.
Nanao akanjo lava lava manga sy pataloha mainty ary kiraro mainty miaraka amina sarontava tarehy amin'ny tànana iray izy. Gray dia hita tamin'ny tampony fotsy, pataloha jeans manga, kiraro volondavenona ary poketra misy paositra.
Gibb dia mpiara-manorina ny vondrona Bee Gees, iray amin'ireo vondrona mahomby indrindra amin'ny sehatry ny mozika malaza.
ny @BeeGees Maribolana @GibbBarry dia hita amin'ny fitsangatsanganana imasom-bahoaka tsy fahita any Miami https://t.co/hz55yop1ox tamin'ny alalan'ny @MailOnline
- Bee Gees Italia (@beegeesitaly) 2 Jolay 2021
Vakio ihany koa: The Devil's Judge fizarana 1: ny fitiavana mafy an'i Ji Sung sy ny fon'ny rantsantanan'i Jinyoung no tian'ireo mpankafy momba ity dystopia ity
zavatra tadiavina amin'ny lehilahy
Iza no nanambady an'i Barry Gibb?
Barry Gibb dia manambady ho an'i Linda Gray, Miss Edinburgh teo aloha. Nihaona izy roa nandritra ny fandraisam-peo nataon'ny Top of the Pops an'ny BBC tany Londres. Nofatoran'izy ireo ny fatotra tamin'ny 1 septambra 1970.
Izy ireo dia ray aman-dreny manan-janaka dimy: Stephen, Ashley, Travis, Michael, ary Alexandra, ary manan-janaka fito.
Barry dia nividy ilay trano mpihira taloha Johnny Cash sy June Carter Cash any Hendersonville, Tennessee. Nanana fikasana hamerina azy io izy ary hamadika azy io ho fialantsasatra amin'ny famoronana hira. Potika tamin'ny afo ny trano ny 10 aprily 2007, izay novaina.
Vakio ihany koa: Mpanakanto makiazy an'i Gabbie Hanna ho an'ny Escape the Night dia mampiharihary ny YouTubers noho ny fandehanan'izy ireo ekipa ekipa marobe
Gibb dia nomena ny anaram-boninahitra 'Freeman of the Borough of Douglas (Isle of Man)' tamin'ny 10 Jolay 2009. Nanjary olom-pirenena amerikana izy mivady tamin'ny 2009 ary nihazona ny zom-pirenen'i UK roa.
I Gibb dia manana trano any Miami, Florida, ary Beaconsfield, Buckinghamshire. Fantatra amin'ny feon-kira malalaka izy ary ny toetrany malaza indrindra dia ny falsetto avo be.
Gibb dia mitazona ny rakitsoratra ho an'ny isa an'isa indrindra Billboard Hot 100. Nanoratra sy niara-nanoratra isa enina ambin'ny folo enina izy Billboard Hot 100. Ny Guinness World Records dia nitanisa azy ho mpanoratra faharoa fahombiazana indrindra teo amin'ny tantara.
Vakio ihany koa: Mijanona fironana #lettuce miaraka amina bitsika 1,3 tapitrisa taorian'ny niverenan'i Stray Kids Hyunjin tao amin'ny Bubble JYP teo am-pihinanana legioma
ny fomba hilaza raha ny fifandraisanareo dia ampy
ny fomba tsy mifehy ny fifandraisana
mifankatiava amin'izay ataonao
ohatrinona ny vidin'ny mrbeast
hevitra mahafatifaty ho an'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny olon-tianao